Amandla wokukhiqiza - i-BXL Packaging Creative
Isungulwe ngo-1999, i-BXL Creative ingenye yezinkampani ezihola phambili zokuklama nokupakisha eChina.
Imakethe enkulu: i-United States, Canada, France, Germany, Italy, South Korea, kanye ne Middle East.
Izimboni eziyinhloko: ubuhle, izimonyo / izimonyo, ukunakekelwa kwesikhumba, amakha, ikhandlela elinamakha, iphunga lasekhaya, ukudla okunethezeka / isengezo, iwayini nemimoya, ubucwebe, imikhiqizo ye-CBD, njll.
Izigaba ezahlukahlukene zomkhiqizo: amabhokisi ezipho ezenziwe ngezandla, amaphalethi wokwenza izimonyo, izikhwama, amasilinda, amathini, izikhwama ze-polyester / tote, amabhokisi epulasitiki / amabhodlela, amabhodlela engilazi / izimbiza. Konke Mayelana nokuPakisha okwenziwe ngokwezifiso.
Umshini Wokuphrinta we-Heidelberg 4C
Umshini wokunyathelisa we-offset waseJalimane i-Heidelberg CD102 ukwandisa kakhulu ukuguquguquka kwemishini, ngokukhishwa okujwayelekile kwamabhokisi enziwe ngezandla ayi-100,000 namabhokisi amakhathoni angama-200,000 ngosuku, ukuqinisekisa ngempumelelo umkhiqizo wokupakisha.
Umshini Wokuphrinta weManroland 7 + 1
Idizayinelwe ngokukhethekile ukukhiqizwa kokuphrinta kwekhwalithi ephezulu, ikakhulukazi iphepha le-mylar, iphepha leparele nezinye izinhlobo zephepha elikhethekile okunzima ukufeza ukusebenza kombala ophezulu. Lo mshini ukuhlanganisa konke.
Indawo yokusebenzela engenantuli
Ukuze uqhubeke nokuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo, ifektri ifakwe ama-workshops angenaluthuli ngokukhethekile.
Isivivinyo Sokushisa, Isivivinyo Sokudonsa, njll, kusuka ekukhetheni kwezinto ukucubungula ukulawulwa kuya ekuqedeni ukuhlolwa komkhiqizo, ukuhlolwa kwezindawo zokuhlola eziyi-108 zokuqinisekisa ikhwalithi enhle yephakeji ngalinye.
Mayelana ne-BXL Creative
xhumana neqembu le-bxl lokudala!
Cela umkhiqizo wakho namuhla!
Siyajabula ukuphendula izicelo nemibuzo yakho.